သင်ယုံကြည်ရတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ သစ္စာဖောက်ခံလိုက်ရတဲ့အခါ ဘယ်လိုပြန်ပြီးတုံ့ပြန်မလဲ? – Trend.com.mm
သင်ယုံကြည်ရတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ သစ္စာဖောက်ခံလိုက်ရတဲ့အခါ ဘယ်လိုပြန်ပြီးတုံ့ပြန်မလဲ?
Posted on February 15, 2018 by Noel
သစ္စာဖောက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်က တော်တော်ကိုဆိုးရွားမှာပါ။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေ၊ ယုံကြည်မှုအပြည့်ပေးထားတဲ့သူတွေဆီက သစ္စာဖောက်ခံရတဲ့အခါ ကိုယ့်အမှားအယွင်းကြောင့်လား၊ကိုယ့်အားနည်းချက်ကြောင့်လားဆိုပြီးတွေးထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါဆိုသစ္စာဖောက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး နည်းနည်းလေးဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်။
ချစ်သူဆီကသစ္စာဖောက်ခံရတာလား၊သူငယ်ချင်းဆီကသစ္စာဖောက်ခံရတာလား။ဒါမှမဟုတ် တခြားကိုယ်ယုံကြည်ရတဲ့မိတ်ဆွေကသစ္စာဖောက်သွားတာလား စသဖြင့်ရေရှည် တည်ဆောက်ထားတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုပြိုကွဲသွားတဲ့အခါ သင်ဘာပြန်လုပ်မလဲ?
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ချင်တဲ့အခါမှာယုံကြည်မှုကလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။နှစ်ရှည်လများတည်ဆောက်ထားတဲ့ယုံကြည်မှုပျက်စီးသွားရင် အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးကလည်းပြိုကွဲပြီး ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ အဲ့ဒါအပြင်သစ္စာဖောက်ခံလိုက်ရတယ်လို့သိတာတောင် စွန့်လွှတ်ဖို့ခက်ခဲတတ်ကြပြီး ပြန်ပြီးတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားလေ့ရှိပါတယ်။
သစ္စာဖောက်ခံရတဲ့အခါ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ငါဘာလုပ်မိလို့ ငါ့အပေါ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ရက်ရတာလဲ ဆိုပြီးတွေးနေမိပါလိမ့်မယ်။ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်းလည်းမသိ၊သစ္စာဖောက်သွားတာကိုပဲ နားလည်ခွှင့်လွှတ်ပေးလိုက်ရမလား၊တစ်ခါတည်းအပြတ်ဖြတ်လိုက်ရမလား ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်သင့်အပေါ်သစ္စာဖောက်ပြီးယုံကြည်မှုကိုရိုက်ချိုးပစ်ခဲ့တဲ့လူတွေအပေါ်ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ရမလဲဆိုတာပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
သစ္စာဖောက်ခံလိုက်ရတဲ့အခါ စိတ်ထဲမှာတနုံနုံသိမ်းဆည်းမြိုသိပ်ထားတာက မကောင်းပါဘူး။ သူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဒေါသတွေပေါက်ကွဲထုတ်ပစ်လိုက်ပါ။ကိုယ့်အပေါ်နာကျင်စေခဲ့သလောက် ပြန်ပြီး ဒေါသတွေပေါက်ကွဲပစ်လိုက်ပါ။စိတ်ထဲမှာနာကျင်နေတာတွေ ဖွင့်ထုတ်လိုက်ရင် ပေ့ါပါးသွားမှာဖြစ်လို့ စိတ်ထဲမှာရှင်းလင်းပြီးအခဲမကျေတာတွေပျောက်သွားတဲ့အထိ ဖွင့်ထုတ်လိုက်ပါ။
သစ္စာဖောက်တယ်ဆိုတာကလည်းအကြောင်းပြချက်တော့ရှိမှာပါပဲ။အကြောင်းပြချက်၊အကြောင်းရင်းမရှိပဲသစ္စာဖောက်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့် သစ္စာဖောက်ခံရတဲ့အကြောင်းရင်း ကိုဖြေရှင်းချက်တောင်းပါ။မျက်စိမှိတ်ခွင့်လွှတ်လိုက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ပေမဲ့ အကျိုးအကြောင်းကို နားထောင်ပြီးခွင့်လွှတ်မှုအနည်းငယ်ထားပါ။ပြီးရင် ဘ၀ထဲကထွက်သွားခွင့်ပြုလိုက်ပါ။ ကိုယ့်ကိုမလိုအပ်တဲ့သူတွေကို ကိုယ်ကရောဘာအတွက်ကြောင့်လိုအပ်ရမှာလဲ?
သစ္စာဖောက်ခံလိုက်ရတယ်။ဟုတ်ပြီ ထားတော့။တစ်ခါခံလိုက်ရတာက ကိုယ့်အပြစ်မဟုတ်ပေမဲ့ နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးသစ္စာဖောက်ခံရရင် ကိုယ့်အပြစ်လည်းနည်းနည်းပါနေပါပြီ။ လူတစ်ယောက်ကို စုံလုံးကန်းယုံကြည်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုဖျောက်ဖို့သင်ခန်းစာယူပါ။ ကိုယ့်လက်ချောင်းအတိုအရှည်တောင်မတူညီတာ တခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်နဲ့ကိုယ့် စိတ်နဲ့ထပ်တူညီဖို့ဆိုတာရှားပါတယ်။ယုံကြည်မှုကိုသစ္စာဖောက်ခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာ တခြားဘယ်သူ့ကိုမှလည်းမယုံကြည်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ အသားလွတ်ကြီးလုံးဝမယုံကြည်တာ ထက်စာရင် ကိုယ့်အနားရောက်လာတဲ့လူတစ်ယောက်ကို လေ့လာပါ။ သုံးသပ်ပါ။ယုံကြည်မှု အနည်းငယ်ထားပြီး အတူတူလက်တွဲလုပ်ကိုင်ပါ။
ခွင့်လွှတ်တာ၊ကျေအေးတာတွေမလုပ်ချင်ဘူး။ခွင့်လွှတ်မှုနဲ့မတန်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အပေါ်သစ္စာဖောက်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုဥပေက္ခာပြုလိုက်ပါ။သူတို့ကို ဘ၀ထဲကထုတ်လိုက်ပြီး ဒေါသတွေတနုံ့နုံ့လည်း ဖြစ်စရာမလိုပဲ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ပါ။ ကိုယ်မှားတာမဟုတ်တဲ့အတွက် ရှောင်ရှားနေစရာ၊အားငယ်နေစရာမလိုပါဘူး။ မျက်နှာချင်းမဆိုင်ရဲရမှာသူတို့ပါ။ ကိုယ့်အပေါ်သစ္စာဖောက်ခဲ့ တာမှားလေခြင်းဆိုပြီးနောင်တရတဲ့အထိ အကောင်းဆုံးဘ၀မှာနေထိုင်ပါ။သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး ခေါင်းထဲမှာပူလောင်တာ၊ စိတ်ဆိုးတာ၊ဒေါသထွက်တာ၊ခွင့်လွှတ်တာစသဖြင့်ဘာတစ်ခုမှမတွေးပဲ ကိုယ့်ဘ၀ထဲမှာ သူတို့မရှိခဲ့သလို နေထိုင်ပါ။ဒါက သူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရာတစ်ခုပါပဲ။
ဒီအချက်တွေကိုမှတ်ထားပြီး ကိုယ့်အပေါ်သစ္စာဖောက်သွားတဲ့သူတွေ ကိုပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းနိုင်ပါစေ…
Valentine’s Day မှာ အများအားကျအောင် ရိုမန်တစ်ဆန်ခဲ့ကြတဲ့ David Beckham နဲ့ Victoria Beckham